कनाडामा संघीय चुनाव कसरी काम गर्दछ
मतदान र सरकारको एक अवलोकन
क्यानाडा एक संवैधानिक राजतन्त्र भित्र एक संघीय संसदीय लोकतान्त्रिक हो। महाराष्ट्र (राज्यको प्रमुख) मातृभूमि द्वारा निर्धारित गरिन्छ, क्यानाडाहरूले संसदका सदस्य छन, र संसदमा सबै भन्दा बढी सीटहरू पाउने पार्टीको नेता प्रधान मंत्री हुन्छ। प्रधान मंत्री कार्यकारी शक्ति को प्रमुख को रूप मा कार्य गर्दछ र यसैले सरकार को प्रमुख। क्यानाडाका सबै वयस्क नागरिकहरूले मतदान गर्न योग्य छन् तर तिनीहरूको मतदानमा सकारात्मक पहिचान देखाउनु पर्छ।
निर्वाचन क्यानाडा एक गैर-पक्षिय एजेन्सी हो जसले संघीय चुनाव, पक्ष-निर्वाचन, र रेफन्डमेन्टहरूको आचरणको लागि जिम्मेवार छ। चुनाव क्यानाडा नेतृत्व क्यानाडा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो हाउस अ Commons को एक संकल्प द्वारा नियुक्त गरिन्छ।
क्यानेडामा फेडरल चुनाव छ?
क्यानाडा संघीय चुनाव सामान्यतया हरेक चार वर्षमा आयोजित हुन्छ। त्यहाँ निर्धारित मिति कानुनी कानून हो जसले संघीय चुनावको लागि "निश्चित मिति" सेट गर्दछ जुन चार चार वर्ष अक्टोबरको पहिलो बृहस्पतिमा रहनेछ। तथापि, अपवादहरू बनाइन्छ, तथापि, विशेष गरी यदि सरकार Commons Commons को विश्वास गुमाउँछ।
नागरिकहरूको मतदान गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। यसमा समावेश छ:
चुनावको दिन मतदानमा मतदान गर्नुहोस्
स्थानीय अग्र प्रदूषणमा मतदान गर्नुहोस्
स्थानीय चुनाव क्यानाडा अफिसमा मतदान गर्नुहोस्
मेलद्वारा मतदान गर्नुहोस्
छिटो र संसदका सदस्यहरू
जनगणना क्यानाडाका निर्वाचन जिल्लाहरू वा छुटकारा निर्धारण गर्दछ। 2015 क्यानेडियन संघीय निर्वाचनका लागि, छुटहरूको संख्या 308 देखि 338 सम्म बढ्यो।
हरेक सवारीमा मतदाताहरूले सदन सभामा पठाउन संसदको एक सदस्य (सांसद) छनोट गर्छन्। क्यानाडाको सीनेट एक निर्वाचित निकाय होइन।
संघीय राजनीतिक दलहरु
क्यानाडाले राजनीतिक दलहरूको दर्ता राख्छ। जबकि 24 दलहरूले उम्मेद्वारहरू खेलेका थिए र 2015 चुनावमा मतदान पाएका थिए, क्यानाडाका निर्वाचन वेबसाइटले 2017 मा 16 वटा पंजीकृत पक्षहरू सूचीबद्ध गरे।
प्रत्येक पार्टीले प्रत्येक सवारीको लागि एक उम्मेदवारलाई नामकरण गर्न सक्छ। अक्सर, संघीय राजनैतिक दलहरूको मात्र एक मुट्ठीका प्रतिनिधिहरू सभा कमन्समा सीटहरू जित्छन्। उदाहरणका लागि, 2015 निर्वाचनमा, केवल कन्वर्वरेटिभ पार्टी, नयाँ डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी, ब्लक क्वेबेकोइस र ग्रीन पार्टीले उम्मेद्वार हाउस कमन्समा चयन गरेका छन।
सरकार गठन गर्दै
एक पार्टी जो सामान्य संघीय चुनावमा सबैभन्दा छुटकारा पाउने पार्टीलाई राज्य बनाउन को लागी राज्यपाल द्वारा आग्रह गरिएको छ। त्यस पार्टीको नेता क्यानाडाको प्रधानमन्त्री बन्छ। यदि पार्टीले आधा भन्दा बढी छुटकारा पाउँछ भने - 2015 को चुनावमा 170 सीटहरू छन् - त्यसपछि यो बहुमत सरकार हुनेछ, जुन हाउस कमन्समा पारित कानुन पार गर्न सजिलो बनाउँछ। यदि विजयी पार्टीले 169 सीटहरू वा कम जित्छ, यसले अल्पसंख्यक सरकार बनाउनेछ। सभाको माध्यमबाट कानून प्राप्त गर्न, अल्पसंख्यक सरकारले सामान्यतया अन्य पक्षका सांसदहरूबाट पर्याप्त मत प्राप्त गर्न नीतिहरू समायोजन गर्नु पर्छ। सत्तामा रहन सभाको कमेन्टको विश्वास कायम राख्न एक अल्पसंख्यक सरकारको निरन्तर कार्य गर्नु पर्छ।
द म्यानेज हाउसको दोस्रो उच्चतम सीट जित्ने राजनीतिक दलले आधिकारिक विपक्षी बन्छ।
क्यानडाको आधिकारिक विरोध काउन्टरहरू बहुमत र नियन्त्रण
T4 (पुनरावृत्ति भुक्तानीको विवरण)
क्यानाडा संघीय सरकार
चिनियाँ हेड टैक्स र क्यानाडामा चिनियाँ बहिष्करण अधिनियम
क्यानाडा को गवर्नर को भूमिका को भूमिका
Fredericton, नयाँ ब्रन्सविकको राजधानी
क्यानाडा ओल्ड एज सुरक्षा (OAS) पेंशन परिवर्तन
परिभाषा, उच्चारण, र Seiyu को महत्व
स्पेनिस Verb Conjugation परिचय
के पेंसरलाई उपजीवजनक चाहिन्छ?
नायलॉन-फ्लूरो हाइब्रिड लाइन
के गरम खाना मा बहाव सचमुच यो कूलर बनाइन्छ?
एडल्फल लोओसको जीवनी
"बिग ब्रेक प्रिंस एडवर्ड आइल्याण्ड" प्रतियोगिताहरू
गोल्फ शफ्टहरू: कुन ट्रिम र दृश्यहरूमा प्रभावहरू अन्त्य हुन्छ
हल्का-भन्दा-विमान विमानको इतिहास
जोसेन कोरिया को रानी मिन
कसरी पत्ता लगाउने पैदल प्यान्टहरू पत्ता लगाउनुहोस्
Titleist 905 Series डिवाइस ड्राइवर्स: 905T र 905 एस
जर्मनीमा उमेरको एक आकर्षक आउँदैछ
10 रेडियो सक्रिय दैनिक उत्पादन
बाइबल एन्जिल्स: एलीशा र एन्जिल्सको सेना
11 प्रतिभाशाली उत्पादकता युक्तिहरू तपाईंले चिन्नुभएको छैन